म्यानमारमा च’र्कियो सैनिक शासनविरु’द्ध आ’न्दोलन, एकैदिन कम्तिमा १८ आ’न्दोलनका’रीको मृ’त्यु – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. म्यानमारमा च’र्कियो सैनिक शासनविरु’द्ध आ’न्दोलन, एकैदिन कम्तिमा १८ आ’न्दोलनका’रीको मृ’त्यु – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
म्यानमारमा च’र्कियो सैनिक शासनविरु’द्ध आ’न्दोलन, एकैदिन कम्तिमा १८ आ’न्दोलनका’रीको मृ’त्यु
म्यानमारमा सैनिक शासन विरो’धी आ’न्दोलनका क्रममा मृ’त्यु हुनेको संख्या १८ पुगेको छ । बीबीसीका अनुसार आइतबार एकैदिन १८ जनाको मृ’त्यु भएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार कार्यालयले आइतबार भएको प्र’हरी हस्तक्षेपलाई सैनिक शा’सन विरु’द्ध सुरु भएको आ’न्दोलयताकै घा’तक भनेको छ र उक्त दिनलाई सबैभन्दा ‘घा’तक दिन’ भनेको छ ।
आइतबार म्यानमारका यंगुन, दवेई र मन्डाले शहरमा प्रदर्शन च’र्किएको थियो । ती शहरमा धेरै प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको छ । प्रदर्शनकारीहरूमाथि द’मन गर्न त्यहाँको सुरक्षाबलले रबर बुलेट, टियर ग्याससँगै गोली समेत चलाएको थियो । उता, त्यहाँको सैनिक नेतृत्वले संयुक्त राष्ट्रसंघका राजदूतलाई समेत ह’टाइदिएको छ । सैनिक सत्ताको विरो’धमा बोलेको भन्दै राजदूतलाई ह’टाइएको हो ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको March 1, 2021 March 1, 2021 119 Viewed